Blog – Page9– T-WORK SYSTEM
” ငွေကုန်ကြေးကျ သက်သက်သာသာဖြင့် ပိုမိုစနစ်ကျသော Online Shop များ ပြောင်းလဲဖန်တီးရန်”
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ကျနော်တို့ T-WORK SYSTEM သည် နည်းပညာအသစ်များစွာကို အသုံးပြု၍ လူကြီးမင်းတို့ (Online Shop) အရောင်းဆိုင်များကို ငွေကုန်ကြေးကျ သက်သက်သာသာဖြင့် ပိုမိုစနစ်ကျသော အရောင်းဆိုင်များ ပြောင်းလဲဖန်တီးရန် ကူညီဆောင်ရွက် ပေးသော Company ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့နှင့် ကိုက်ညီသော Plan များ၊ Package…
“Facebook ပေါ်တွင် ကြော်ငြာရအောင်”
Q. Facebook ပေါ်မှာ ဘယ်လိုကြော်ငြာမလဲ ?A. Facebook ပေါ်တွင် မိမိတို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချရန်အတွက် ပြုလုပ်ထားသည့် Website, Page နှင့် Post များကို လူအများမြင်စေရန် Promote or Boots ပြုလုပ်၍ မိမိတို့နှစ်သက်ရာအား ရွေးချယ် ကြော်ငြာနိုင်ပါမည်။ Q. Facebook…
Facebook Shop Section for E-Commerce Website
Facebook Page မွာ Shop Section Feature ကို ေကာင္းေကာင္းအသံုးျပဳေနျပီဆိုရင္ေတာ့ Shop Section နဲ့ခ်ိတ္ဆက္ျပီး ဘာေတြဆက္လုပ္သင့္တယ္ ဘယ္လိုအက်ိုးေက်းဇူးေတြရရွိနိုင္မလဲဆိုတာ ဆက္ေလ့လာျကည့္ျကပါစို့။ သင့္အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္တဲ့ Online Shop တစ္ခုကို ေရရွည္ လုပ္ေဆာင္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ E-Commerce လို႔ေခၚတဲ့ ကိုယ္ပိုင္…
A New Feature for Online Shop
Online Shop လုပ္ေနသူေတြအတြက္ Facebook မွာ Shop Section ဆိုတဲ့ Advanced Feature တစ္ခုထပ္တိုးလာေနၿပီေနာ္။ တစ္ခ်ိဳ႕လည္းသိၿပီးၾကၿပီလို႔ ထင္ပါတယ္။သင့္အေနႏွင့္ တင္ၿပီးသားကုန္ ပစၥည္းေတြကို ဘယ္ေလာက္ပဲၾကာၾကာ ဘယ္ေလာက္ပဲမ်ားမ်ား တစ္ေနရာထဲမွာ စုစည္းတင္ျပထားလို႔ ရေနပါၿပီ။ သင့္ရဲ႕ Customer ေတြအေနနဲ႕လည္း တင္ထားတာၾကာေနၿပီျဖစ္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြကို…
မကြာသေးမီအချိန်က Facebook မှ Page ဖွင့်ပြီး ရောင်းချနေသော Online Shop Owner များနှင့် Customer များအတွက် Shop Section ဆိုတဲ့ Feature တစ်ခု ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ အရင်တုန်းက Page မှာ ပုံတွေတင် ပစ္စည်းတွေ တင်ရောင်းတဲ့အခါPost တွေများလာတာနဲ့အမျှ…
သင့် ကိုယ်ပိုင် Website များ လွှင့်တင်ရန် လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ နေရာ တစ်ခုရှာနေပါသလား..? ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ…
Online Shopping လုပ်ကိုင်နေသူလား..? လူကြီးမင်း Online Business အတွက် ကိုယ်ပိုင် Website ပိုင်ဆိုင်ထားပြီလား..?နိုင်ငံတော်အစိုးရ…
သင်သာ E-Commerce Website တခုကို ပိုင်ဆိုင်ရရင် ဘယ်လိုအကျိူးကျေးဇူးတွေ ရရှိနိုင်သလဲ -သင်ရဲ့Products များကို Facebook…